Malaoi: Mihaona amin’i Steve Sharra, mpanoratra eto amin’ny Global Voices · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Desambra 2011 14:25 GMT
Miresaka amin'ny Mpanoratra Malaoita ao amin'ny Global Voices Steve Sharra i Linda Annan . Mpitoraka bilaogy i Sharra, mpanao gazety mahaleo tena, mpampianatra sady manonta boky fampianarana. Ao amin'ny Afrika Aphukira izy no mitoraka bilaogy.Efa namoaka tononkalo sy tantara foronina izy, tantara amin'ny fampielezam-peo (Malawi Broadcasting Corporation) ary tantara fohy amin'ny fampielezam-peo (BBC); ary nanoratra bokin'ny ankizy ihany koa, “Fleeing the War” (Mitsoaka ny Ady), izay nahazo ny loka British Council Write, fifaninana Tantara tamin'ny taona 1995. Nanjary Mpikambana am-Boninahitra ao amin'ny Fandaharanasa Iraisam-pirenena momba ny Fanoratana tao amin'ny anjerimanontolon'i Iowa (Etazonia) izy tamin'ny 1997 , taorian'i Prof. Emeritus Steve Chimombo (1983), ary ny farany teo i Edison Mpina (1984) ary tamin'ny 1998 izy no lasa mpanoratra an-trano ao amin'ny anjerimanontolon'i Iowa (Etazonia).
Resahin'i Steve Sharra mandritra ity resadresaka mivantana ity ny mikasika ny toeran'ny haino aman-jery sosialy Malaoita, ny làlam-piainany teo amin'ny sehatry ny asa ary koa ny fitiavany ny fianarana, ny fampianarana ary ny fanoratana.
Linda Annan (LA): Azonao lazalazaina anay fohifohy ve ny mikasika anao?
Steve Sharra (SS): Teraka tany amin'ny toerana atao hoe Bawi, distrikan'i Ntcheu, any Malaoi ny tenako. Lasa nipetraka tany amin'ny ray aman-dreniny ny reniko tamin'i dadanay nandeha nianatra nanao polisy. Ny raibeko, pasitera, kosa nampianatra tao amin'ny Sekoly Ambaratonga fototra Bawi. Nifindra teny amin'ny Tobin'ny Polisy izahay tamin'izaho herintaona teo ho eo. Dia teo aho no nihalehibe. I Zomba no renivohitr'i Malaoi hatrany amin'ny andron'ny fanjanahan-tany tamin'ny taonan'ny 1890, mandra-pahatongan'ny 1975 izay nanovan'ny filoham-pirenena Malaoita voalohany, i Dr. Hastings Kamuzu Banda, azy ho i Lilongwe. Nianatra tao amin'ny Sekoly Fanabeazana Fototry ny Polisy, St Stanislaus Prep School aho, ny Seminary Nankhunda , ary ny Sekoly Faharoa Fototry ny Polisy. Taorian'ny Sekoly Faharoa Fototra aho dia nankany Lilongwe tao amin'ny Fianarana ambony manofana ho mpampianatra, ny taona 1990 hatramin'ny taona 1993, izay nivohako ho mpampianatra eo amin'ny sekoly ambaratonga fototra. Nilaozako ny fampianarana tamin'ny taona 1994 ary lasa mpanampy amin'ny famoahana fitaovana fampianarana tao amin'ny Foiben'ny fandaharan'asa nasionalin'i Malaoi, ny Ivontoeram-Pampianarana ao Malaoi. Tamin'ny taona 1998 aho no nandeha tamin'ny Sekoly Ambony, tao amin'ny anjerimanontolon'i Iowa aloha ny voalohany, ary avy eo ny anjerimanontolon'ny Fanjakan'i Michigan izay samy any Etazonia. Tany Iowa aho no nandalina ny Fanabeazana Anglisy, ary tany Michigan kosa ny fianarana ho Mpampianatra, ary nanoratra ny fanadihadiako mikasika ny endriky ny fandaharan'asa amin'ny fanabeazana am-pilaminana. Fandrisihana ny famehtrahana fomba fijery iray eo amin'ny fandaharam-pampianarana no nentiko nanohana ny doktora-ko izay nantsoiko hoe uMunthu-peace, karazana rariny ara-tsosialy miorina amin'ny famaritan'ny Afrikana ny maha-olombelona, ary ny fifampiankinantsika amin'ny maha samy olombelona. Niverina tany Malaoi aho ny May 2010, rehefa nandany telo taona nanao mpampianatra mpanampy mikasika ny fianarana ny fandriampahalemana sy ny lalàna tao amin'ny Departemanta filozofia tao Michigan.
Steve Sharra, mpitoraka bilaogy Malaoita sady mpanoratra ao amin'ny Global Voices. Sary nahazoana alalana avy amin'i Noelin Zawazawa.
LA: Inona no dikan'ny Afrika Aphukira, anaran'ny bilaoginao ? Misy antony manokana ve nisafidiananao io anarana io ?
SS: Raha ara-bakiteny, ny “Afrika Aphukira” dia midika hoe “Mbola hiverina hateraka indray i Afrika.” Nifidy ity anarana Chichewa ity ny tenako ho anaran'ny bilaogiko mba hanehoako ny fomba fihevitro izay mbola tsara mikasika an'i Afrika; finoana amin'ny ho Fahaveloman'ny Afrikana indray.
LA: Aiza ho aiza no toerana misy ny tontolon'ny bilaogy Malaoita?
SS: Raha ny hevitro manokana, raha raisina fotsiny amin'ny hoe mahabilaogy azy, dia mbola taraiky lavitra any aorian'ny tontolon'ny mediam-bahoaka Malaoi ny tontolon'ny bilaogy Malaoi. Manontany tena aho raha toa ka any malaoi irery ihany izany. Fotoana im-betsaka ny Malaoita iray mpitoraka bilaogy no namoaka vaovao tena nanamarika be, ohatra hoe i Boniface Dulani izay olona voalohany nanoratra mikasika tolona fikatsaham-pahalalahana tao amin'ny anjerimanontolon'i Malaoi, ora vitsy monja taorian'ny nipoahany. Tamin'ny faha-12 Febroary 2011 izany, raha nampiantso an'i Dr. Blessings Chinsinga, mpampianatra eny amin'ny anjerimanontolo ny Inspektera Jeneralin'ny Polisy Malaoita, i Peter Mukhito, haka am-bavany azy mikasika ny fampianarana izay nampiasany ny firohotana tany Tonizia sy tany Ejipta ho ohatra enti-manazava teboka iray. Nitoraka bilaogy vao haingana izao i Mabvuto Jobani mikasika ny vaovao farany mahavoarohirohy ny polisy tamin'ny vono olona nahazo ilay mpianatry ny Anjerimanontolo Politeknika ao Malaoi, i Robert Chasowa, ny 24 Septambra teo. Etsy andaniny, saika facebook avokoa, sy twitter izany raha somary hitarina kely, izany no tena endriky ny haino aman-jery vaovao any Malaoi.
Steve Sharra mandihy tanatinà mariazy iray. Sary nahazoana alalana avy amin'i Mpatso Chabwera.
LA: Toa ireny mpisolo vava miaro be an'i Malaoi ireny ianao. Ankoatry ny maha Malaoita anao, inona ihany koa no mety ho antony mahatonga an'izay?
SS: Tena tsara fipetraka ilay fanontaniana, Linda. Manana ohabolana Chichewa izay izahay manao hoe “Nankununkha saadzimva.” Azo adika izy io hoe tsy mahare ny fofon'ny tenany ny olona iray. Fa ataoko angamba fa noho ny antony araky ny tantarako manokana sy ny fiaviana ara-politika no tena iavian'ny fiarovako be loatra an'i Malaoi. Mitaky anay hanao fandinihana ara-tsaina lalina ireo taona maro nolalovako tao amin'ny sekoly ambony ny voalohandohan'ny taona 1998-1999. Raha vao nanao jery todika fotsiny ny toerana niaviako aho, dia nanomboka nahatsikaritra ireo singa maro maha-Malaoita sy Afrikana. Tsy mba nanana fotoana nanaovana izany mihitsy fony aho mbola nipetraka tany Malaoi. Ataoko angamba fa saika maro amintsika no manao izany rehefa niala ny tanindrazana ary mivoaka ivelan'ny kaontinantantsika. Izany hoe manomboka misy lanjany lehibe ny maha Maloaita sy Afrikana. Tena nahatonga saina ahy ary nampandinika ahy kokoa ireo sosokevitra mikasika ny tsy fananana fiaviana sy ny fanambaniana foko izany. Mino aho fa mifandray amin'ny maha olona mainty hoditra izany, ary koa amin'ny maha Afrikana. Izany koa no hitako raha vao nanomboka namaky ny fironan-kevitra Pan-Afrikanista aho, ka dia niara-tonga daholo izany. Noraisiko hoe isan'ny andraikitro amin'ny maha Malaoita ny tenako, olona mainty hoditra, ary Afrikana ahy izany ny manaparitaka sy miaro ireo fahasarotana maro amin'ny fahafantàrana an'i Afrika. Io no antsoin'i Paul Tiyambe Zeleza hoe ny tena ilaina amin'ny avara-pianarana afrikana tsirairay. Hitako mihitsy ny mahatonga an'i Afrika tsy hahazo aina noho ny sary izay namboarina ho an'io kaontinanta io nandritra izay 500 taona nanjakazakan'i Eoropa tamin'izao tontolo izao izay.
LA: Inona no antony mahatonga anao misafidy hampifanantona ny fomba fijerinao amin'ny “Fomba fijery epistemolojika Afrikana” araka ny ambaran'ny bilaoginao?
SS: Ao anatin'ny fianarana norantoviko ao, dia namaky aho mikasika ny rafitry ny fahafantarana, ny fahalalana izay mikatroka mikasika ny fomba hamokarana fahalalana. Teraka tato anatiko àry fa izay nosokajiana ho ny fahalalana avy any an-tsekoly dia vokatry ny fomba iray fampahafantarana voafaritra, ny epistemolojia Eoropeana. Maro amin'ny fahaizana no fahaizan'olombelona, fa i Eoropa kosa dia namolavola fomba famokarana sy fanjifàna fahalalàna izay manome tombony ireo lova sy sivilizasiona Eoropeana. Tsy tokony ho olana izany, raha toa ka, amin'ny lafiny izay anomezany lanja ny fomba ataony, tsy manindry na manaratsy ny fomba fandalinan'ireo fiarahamonina hafa izy. Tamin'ny fikarohana nataoko nahazoako ny doktora-ko, dia namaky ireo filozofa Malaoita toa an’ i Harvey Sindima, Augustine Musopole, sy Gerard Chigona ny tenako, izay nitrandraka ny uMunthu amin'ny maha epistemolojia Afrikana azy, ary koa ireo mpandalina siansa ara-politika toa an'i Richard Tambulasi sy Happy Kayuni izay niaro ny hevitra hoe ny uMunthu ho fironan-kevitra ara-politika Afrikana. Haiko avy amin'ireny tampom-pahalalàna ireny fa ny mahavoa an'i Afrika ihany koa dia maha-any amin'ny rambony azy loatra ny epistemolojia Eurocentric. Mba ahafahana miatrika iay olana izay, mino aho fa mila mianatra ireo epistemolojia Afrikana isika, mba hahaizantsika mahafantatra an'izao tontolo izao avy amin'ny fomba fijery Afrikana. Izany no antsoin'i Mahmood Mamdani hoe “mandinika an'izao tontolo izao avy amin'ny fomba fijery avy eto an-toerana.” Hatreto aloha dia mbola tsy any amin'ny lalana tokony ho izy no anaovantsika izany, ary dia tena mizaka ny vokany mahatsiravina i Afrika amin'izao fotoana. Fa efa mihatsara ny zavatra rehetra amin'izao, raha ny fahitako azy. Mahita olona maro dia maro ny tenako tonga saina hoe maninona moa i Afrika no tsy maintsy mandrafitra fahatokisan-tena sy miara-miasa amin'i Eoropa, Amerika, ary Azia raha jerena amin'ireo tombony maro ananan'i Afrika. Fa mbola mila ezaka ara-tsaina goavana sy fahavononana ara-politika be mihitsy izay; tena fiovana ifotony eo amin'ny fahaiza-mitarika.
LA: Lazao amiko hoe ny mikasika ny“Fleeing the War.” Haiko hoe bokin'ankizy izy io fa inona no tena lazainy ary inona no nahatonga azy ?
SS: Boky tantaran'ankizy i “Fleeing the War ” izay nosoratako tamin'ny 1995. Mikasika vondrona adolantsento Malaoita izy ity izay mihaza ao amin'ny sisintany Malaoi-Mozambika, toerana izay misy ny tanàna onenan'izy ireo. Gaga izy ireo tafahaona tamina zazakely roa, lahy sy vavy, izay toa very. Nitsoaka ny ady sivily tany Mozambika izy ireo. Niaraka nitsoaka tamin'ireo ray aman-dreniny izy ireo ny alina, saingy vetivety avy eo dia very. Ny ray aman-dreniny nandray làlana hafa, ary ny azy ireo kosa làlana hafa. Nentin'ireo ankizy Malaoita tany an-tranony ireo zaza Mozambikana, ary nomeny toerana. Enim-bolana taty aorian'ny fikarohana, dia nizotra nankany amin'ny tanàna Malaoita ireto ray aman-drenin'ireto zaza, ary nahita indray ireto zanany efa tsy hita ela. Tena zava-nisy marina no niaingan'ny tantara. Nisy tokoa ny ady sivily tany Mozambika teo anelanelan'ny taona 1976 sy 1991. Mozambikana an-tapitrisany no nitsoaka nankany Malaoi ary nanorim-ponenana tany. Maro amin'izy ireo no efa niteny sahady ny Chichewa, fiteny iraisana eo amin'ny sisintany manasaraka ireo firenena roa. Maro tamin'izy ireo no niverina nody taorian'ny ady, fa maro ihany koa no nijanona ary lasa mponina Malaoita. Niasa ho toy ny foibe fanomezan-tsakafo ny fianarana voalohany izay nampianarako tany amin'ny disitrikan'i Ntcheu. Tonga mitsidika ao ny manam-pahefana avy amin'ny UNHCR ary manome fitaovana ho an'ireo mpitsoa-ponenana. Avy lavitra izy ireo, ary eny an-dalan'ny ho any amin'ilay foibe fizaran-tsakafo dia mipetraka maka aina eo amin'ny hazo be iray eo akaikin'ny trano fivarotan'enta-madinika an'ny dadatoako eo an-tanàna eo aloha. Dia mipetraka koa aho miresaka amin'izy mikasika ny zava-manjo azy ireo. Dia norafetiko tamin'ny alalan'ireo fihaonana ireo ilay tantara.
LA: Mandray anjara amin'ny tetikasa Fanohanana ny Fampivelarana ny Mpampianatra Malaoita Matihaninana ianao (Malawi Teacher Professional Development Support) (MTPDS) e? Inona izy ity ary ahoana no nahatonga anao ho tafiditra ao anatin'izy io?
SS: Tetikasan'ny governemanta Malaoita izy ity, amin'ny alalan'ny Ministeran'ny Fampianarana, ny Siansa ary ny Teknolojia. Manangana rafitra fampivelarana mpampianatra matihanina izahay, izay ho an'ny mpampianatry ny sekoly ambaratonga fototra, ny ankamaroan'izy ireo manko dia tsy manana izany fotoana izany raha vao nahazo diploma fampianarana teny amin'ny sekoly fampiofanana ho mpampianatra. Tafiditra tao anatin'izy ity aho tamin'ny alàlan'ny asa savaranonando nataoko, izay mifandray amin'ny tetikasa.
Steve Sharra eo am-perinasa. Sary nahazoana alalana avy amin'i Speaker Nkhonjera.
LA: Inona no tena mahasarika anao amin'ny fampianarana sy ny fanabeazana? Maninona no tsy zavatra hafa?
SS: atao hoe noho ny kisendrasendra no nahatonga ny fampianarana. Tsy vitako izy ity ho an'ny fampianarana ambony teo amin'ny anjerimanontolon'i Malaoi, ilay hany anjerimanontolon'i Malaoi tamin'ny fotoan'andro. Teo amin'ny 36,000 teo ireo mpianatra tao amin'ny sekoly faharoa fototra no nandao ny fanadinana ahazoana maripahaizana tamin'izany andro izany, nefa nisy toerana teo amin'ny 700 teo tao amin'ny anjerimanontolo. Tolokevitra nomen'ny dadako ny fampianarana. Niala sasatra tao amin'ny tanàna nahaterahan'ny dadako aho fony nivoaka ny fandaharan'asan'ny governemanta amin'ny fampiofanana mpampianatra. Nalefany mailaka tamiko ilay filazana, ary dia nisoratra ah. teo vao hitako fa hay tiako ilay mampianatra. Nanisy dikany ny fiainako ilay izy. Tiako kokoa ny hoe nitantana ny dingana fampianarana zava-baovao, ary koa ny manampy ireo ankizy hianatra. Nanomboka teo, dia nijery izao tontolo izao tamin'ny masonà mpampianatra ny tenako.
LA: Hita mazava be fa voasarika aty amin'ny akademia ianao. Inona no anton'izay?
SS: Tany am-piandohana aloha dia voasarika tamin'ny famoronana asa soratra aho; izay no antso ara-tsaina voalohany azoko. Iray amin'ireo lesona nianarako vao niditra tamin'ny sekoly faharoa fototra ny hoe manome lalàna tena matanjaka hanomezana dikany ny zava-misy saro-takarina ny literatiora. Tamin'ireo poeta Malaoita, Jack Mapanje, Anthony Nazombe, Garton Kamchedzera, Frank Chipasula ary Steve Chimombo, tao anatin'ireo maro hafa, no nahaizako izany, ary koa noho ny fandresen-dahatr'izy ireo teo amiko. Mpanoratra tononkalo avokoa izy ireo, saingy amin'ny maha-manampahaizana amin'ny literatiora, ny asa soratr'izy ireo, ny tononkalo sy ny vatsim-pianarana dia nanokatra varavarankely ho ahy izay nahitako an'i Malaoi tamin'ny fomba hafa. Indrindra fa ny famoretana ara-politika, ny tsy rariny sy ny tsy fitoviana ara-tsosialy izay nahatonga ahy ho tonga saina fa tena azo atao ny manana Malaoi tsaratsara kokoa. Nitranga avokoa izany rehetra izany raha izaho nifindra avy amin'ny sekoly ambaratonga faharoa fototra ho amin'ny maha-mpianatra-mpampianatra. Lasa mpampianatra moa ny tenako, ary niaraka tamin'ny fitiavana manoratra, nanjary zava-mahaliana tsy azo nialàna ny tontolon'ny fampianarana.
LA: Inona izao no asa ataonao ary aiza ianao no monina amin'izao fotoana izao?
SS: Mpampianatra mpanabe ny tenako amin'izao ary koa mpikaroka eo amin'ny fanabezana. Monina any Lilongwe, renivohitr'i Malaoi.
LA: Raha manana fotoana malalaka ianao indray Sabotsy, inona no mety hataon'i Steve Sharra?
SS: Ha ha. Tsy hisy fotoana Sabotsy halalaka izany mihitsy, tahaka izay efa nahazatra. Mety hoe tena hamaky boky tantara noforonina tena tsara avy amin'ny nofinofy aho, na asa famoronana tsy avy amin'ny nofinofy, izany izao no mbola tsy nataoko an-taonany maro izay. Na koa mety milalao echec miaraka amin'ny zanako koa aho .
LA: Voaray tao amin'ny Shuttleworth Fellowship ve ianao? Inona no nataonao hahatanterahan'izany?
SS: Tena kivy mihitsy aho tamin'ny tsy nahavoaray ahy tao amin'ny 2011 Shuttleworth Fellowship. Io no toa hany mpanohana ara-bola misy olona manontany anao mba hamaritra izay tena hitanao fa tsy mety eto amin'izao tontolo izao, na fotsiny aza hoe teo amin'ny fiarahamonina misy anao, ary dia manome vola anao araka izay ilainao mba hanarenanao izany olana izany. Efa nanantena aho hoe hanao tetikasa izay ny hany tanjona tokana dia ny fanomezana hery ireo mpampianatra ao Afrika Atsimon'i Sahara, amin'ny alalan'ny fifanakalozan-kevitra eo amin'ireo samy mpampianatra maneran-tany, ary koa amin'ny alalan'ny famokarana fitarihana ara-tsaina ireo mpampianatra. Mbola manatena aho fa indray andro any dia tsy maintsy hahazo famatsiam-bola hanatanterahana izany.